Pakistan: Fihaonan’ny Bilaogera Tao Lahore · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2017 17:30 GMT
Tamin'ny 23 Novambra 2008, bilaogera Pakistaney maherin'ny 100 no nihaona tamin'ny fivoriana iray tao Lahore, fihaonana voalohany tao an-tanàndehibe tamin'ity karazany ity. Nokarakarain'ny LUMS IEEE Sampan'ny Mpianatra (fiaraha-miasa niarahana tamin'ny CIO Pakistan sy ny Google Pakistan ) ny hetsika. Ny hampivory ireo bilaogera mba hiara-midinika ny hevitra momba ny sehatra famahanana bilaogy ao Pakistan sy hampiroborobo ity fampitam-baovao ity no tanjona. Nifanakalo ny fomba fijeriny ireo bilaogera ary nizara ny tantaram-pahombiazany.
Fivoriana tsy nankalazaina ho an'ireo bilaogera hafahafa miisa roa-polo ao Lahore no nanomanana izany tany am-boalohany. Ny hetsika nalefa tao amin'ny Facebook avy amin'i Badar Khushnood (Mpanolontsainan'ny Firenena , Google) no hany loharanom-baovao tamin'ity fihaonana ity. Toa tsy nampoizina anefa fa maro kokoa ny olona liana tamin'izany ary nihamaro hatrany ny isan'ny olona noheverina hanatrika. Nahomby ny fiaraha-miasan'ny mpikarakara ny hetsika sy ny CIO Pakistan sy RedBull, ary nivadika ho fihaonamben'ny bilaogera ny hetsika izay nahitana ny fahafahan'ireo bilaogera manerana ny firenena nandray anjara.
Toy izao no nosoratan'i Rabia Garib (toniandahatsoratra CIO ao Pakistan) momba ity trangan-javatra ity:
Nanatrika tany an-toerana ihany koa aho amin'ny maha-bilaogera ahy ary faly aho mitantara ity hetsika ity ho an'ny Global Voices. Mitovy amin'ny seminera ny hetsika raha ny hevitro mba handrisihana ireo izay vao manomboka. Nanazava ny maha zava-dehibe ny famahanana bilaogy eto amin'izao tontolo izao ankehitriny i Badar Khushnood .
Nasongadina ihany koa ireo tantaram-pahombiazana .
Azonao jerena ato amin'ny bilaogiko ny antsipiriany tamin'ny hetsika na ao amin'ny pejy fandrakofana ofisialy ny tranonkala CIO Pakistan .